Akhriso Ciidan Lagu Soo Tababaray Dalka Ereteria Oo Gaalkacyo DF Somaliya Geyneyso - HOBYOMEDIA
Home WARARKA GALMUDUG Akhriso Ciidan Lagu Soo Tababaray Dalka Ereteria Oo Gaalkacyo DF Somaliya Geyneyso
Akhriso Ciidan Lagu Soo Tababaray Dalka Ereteria Oo Gaalkacyo DF Somaliya Geyneyso
Sida ay ilo xog ogaal ah usheegeen hobyomedia ciidamo Cusub oo lagu soo tababaray Dalka Ereteria ayaa lagu wadaa in la geeyo Magaalada Gaalkacyo Ee Gobolka Mudug.
Askartaan Soomaaliya loogu soo tababaray Asmara Duleedka ayaa waxaa Dawladu ay rabtaa inay fadhiisin ka sameystaan Duleedka Gaalkacyo qeybta Galmudug ka arimiso.
Ciidanka ayaa dhawaan laga soo daabulayaa Asmara,sida qorshaha yahayna waxay la wareegi doonaan Gaalkacyo Koonfurteeda oo hadda Axmed Xaaf ku shaqeeyo.
Hore waxaa jirtay digniin ay Puntland ka bixisey Labo Isbuuc ka hor ciidan la rabo in la keeno Magaalada Gaalkacyo,sida uu shaaciyey Gudoomiyaha Gobolka Mudug Qeybta Puntland Maamusho,ayna markaas sheegeen inaysan ogolaan doonin sida Dawlada Dhexe wax uwado.
Dhabar jebinta iyo Shirqoolka lala rabo Xaaf ayaana la sheegayaa inay tani qeyb ka tahay iyo damaca Dawlada ay Ciidanka Danab ee Gaalkacyo hadda jooga dhuuso mareeb loo geyn lahaa si amniga Qoor qoor usugi lahaayeen.
Wasiirka Gaashaandhiga Soomaaliya Xasan Cali Amar Dambe ayaa hore ubeeniyey in Ciidamo Soomaaliyeed lagu tababarayo Dalka Ereteria,balse Saraakiil Dawlada Qatar ka socda ayaa la ogaaday inay Ciidan Soomaaliya ugu tababarayaan Asmara duleedkeeda.
Previous articleAkhriso sh shaakir & Macalin Maxamud oo arimo xasaasi ah isku khilaafay
Next articleAl-Shabaab oo weerar ku qaaday Saldhig ay leeyihiin Ciidanka Kenya